Mashruuca Wareejinta Dekeda Berbera Weli shacabka reer Somaliland uma hayaan xaqiiqaad ay falkiyaan ,fahmaan oo ku xasilaan. qalinkii A/fidhinle UK‏ | Berberatoday.com
Mashruuca Wareejinta Dekeda Berbera Weli shacabka reer Somaliland uma hayaan xaqiiqaad ay falkiyaan ,fahmaan oo ku xasilaan. qalinkii A/fidhinle UK‏
Ma Weecsin iyo Beegsin mise Aloos iyo Agaasin Danbe !! Ma Qataabsi Mise Qurbaani…Mise Qadhaabsi iyo Qudh-Qudho joogto? Ma midigays iyo Oodeys ! Mise Gown iyo irbad uun !! Boowe …Malaa….Waa Qaliban !! Mise ..Waaba Suke ! Malaa ..Waa Doolar raadin iyo Dirham-quud !! Mise Xaalku waa Doog dhabasho iyo Doogsin carar !! intaasina waa iga arar afmaldhaheed ….ee Boowe ! bal aan hoos u soo dego !!
Kuy’e Shirkaddu waxay galinaysaa dekeda Berbera cadad lacag dhan 430 malyan oo Dollar.
Kuye Shirkadu iyadaa maangashanaysa Dekeda oo ilaa Free Zone ka ay dhisi doonto maamulkeeda iyo maareyntoodaba loo dabo fadhiisanayaa.
a) 10-ka Sanadood ee ugu horeeya waxay shirkaddu dekeda berbera galin doontaa lacag dhan 10 Malyan oo Dollar.
d) 10–ka sanno ee hore hadii dekedu isku bixin waydo shirkaddu waxay ka baxaysaa heshiiska oo way iska tegaysaa.
e) 15 Million oo xaqul qalin ah ayaanu qalinka ku duugnay , taasoo $10 million oo ka mid ahi ay khasnada dawlada ku dhici doonaan $5 milliona Tagag lagu iibindoono
Shacabka reer Somaliland uma arkaan Wareejinta Dekeda Berbera ” Win Win Situation ” ee waxay u arkaan in shirkad macaash doon ihi ” Profit seeking company ” ay dhitadoodi yareyd iyo dhaqaalahoodiiba afka u dhigatay, shaqsiyaad gaar ahina dano shaqsi ah oo gaar ah ay ku wataan.
Hadaba Su’aalaha shacab weynuha reer Somaliland isweydiinaayo ayaa ah kuwan hoose -:
1- Maadaama Xeerarkii Maangashiga iyo maareynta hantida maguuraanka ah ee dalku ay wada qabyo yihiin side mashruucan balaadhan loo maareynayaa?
2- Hadii aanu mad-madow ku jirin heshiiskan maxay Madaxdii xukuumada ee ka hadashay heshiiska ay isku af ugu hadliwaayeen ?
3- Maxay Xukuumadu istiraajiyad Siyaasadeed oo wacyigelineed uga yeelan wayday Maal-gelinta Siyaasadeed ee Qaranka ?
4– Maxay u cadeyn weyday oo tooshka ugu shidiweyday nuxurka heshiiskan ka danbeeya iyo shaqo abuurka ku lingaxan ?
5- Ma la hor keeni doona nuxurka heshiiskani xanbaarsan yahay Golaha Baarlamaanka si ay unaaqishaan oo shahaadad maalgashi u siiyaan shirkada ?
6- Heshiiskani ma isu dheeli tiran yahay mise waa lakala bursaday? Xaqal qalinka 15 Millionka ahi ma jeebkii kii Genel enery ku dhacay ayuu isna ku dhici doonaa ?
7 – Mashaariicda daba socda heshiiskan ma shaqsiyaadkii koobnaa ayuun baa meel loogu sii guntay mise Somalilandtu way usinaan doontaa ?
8– Yeelkeede, Yeelka iyo Weelka lagu maali doono ma kooxdii ilma jinni boqor ayaa lagu sii naaxin doona mise waa la naadin doonaa?
9-– Yaa kantarooli doona hantida maalgelinta ee Mashaariicdaa baaxada leh ? Goorma ayey bilaabmaysaa Maalgelintaasu ?
10– Maadaama uu riski badani ku gedaaman yahay Geeska Afrika , dawalada UAE na aanay inoo ictiraafin dawladnimo buuxda
Kharaj intee le’eg ayey shirkada DPW dalkeena ku aaminayasaa oo maalgelinaysaa?
Horumar soo kordha lama diidana ee waxaa la diidan yahay naasnuujin ku soo ururta shaqsiyaad kooban sidii hore u dhacday, waxaana xukuumada looga fidhiyaa in ay sife qodobaysan ugu soo bandhigto mashruucan mushtamaca iyo Goleyaasha Wakiilada ee Somaliland. waana in ay Xukuumadu ka yeelataa machruucan Siyaasad cad iyo istiraajiyad wacyigelineed oo cokan .Si ay shacabweynaha reer Somaliland Xaqiiqaad ay falkiyaan oo ku xasilaan uga helaan Mashruucan Baaxada leh.
Waxaa Quluubta Shacanweynaha reer Somaliland ku soo duxaaya Nidaamkii loo maray shirkadihii badnaa ee la siiyey Liisanka Shidaal baadhista dalka sida Shirkadihii Genel – Energy iyo DNO kuwaas oo xaqal qalin laga qaatay oo hawshoodiina loogu dhameeyey gurada xayndaabka madaxtooyada oo aan la soo marin Golihii Baarlamaanka si ay u ansixiyaan oo ay muraadkooda Dastuuriga ah uga gutaan. Hadii ay taasi dib udhacdo iyada oo hada lagu jiro waqti kala guur waa arin khatarteeda leh oo burinaysa xeerarkii iyo Dastuurkii dalka u yaalay.
Shirkadan lagu magacaabo Dubai Port World ( DPW ) Waa shirkad weyn oo macaash doon ah oo ku caan baxday in ay laba listo oo maalgashato Dekedo badan oo qaaradaha aduunka ku kala yaala ka soo bilow Brazil ilaa iyo China laakiin waxay ku fashilantay oo fadeexad qaawan ka qaaday qaar badan oo mandaqadeena ku yaala sida:
1- Waxay mudo maamuleysay oo ay ku fashilantay Dekeda Baaxada leh ee D-Jabuoti , taas oo ay maxkamado isku saareen Wadanka ingiriiska caasimadiisa London.
3- Waxay ku fashilantay oo ay baabiisay oo qalabkiina ka furatay Dekadii caanka aheynd ee Cadan oo iyana hada Dekedaasi ku danbeysay gabaahiir kaluumeysatadu isticmaasho. Danta guud ee shacabka Somaliland Waxay ku jirtaa in shacabka si qodobaysan loogu soo bandhigto Xaqiiqaad ay falkiyaan ka dibna fahmaan oo ku xasilaan. .
Waxaan idiinku soo garoocayaa maanta ,
misna ma hadhsado ee ee
Allow sahal amuuraha Aakhiro Samaan Oman baa yimiye!!